Nampihena ny fifandonana teo amin’ny olombelona sy ny elefanta ny ‘Bisy Sakaizan’Elefanta’ voalohany eran’izao tontolo izao ao Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2020 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Italiano, 日本語, English
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Oktobra 2017)
Mandeha amin'ny ‘Bisy Elefanta’ ny mpianatra any Sri Lanka mba hialana amin'ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona. Sary avy amin'ny Groundviews.
Niseho tao amin'ny Groundviews, tranonkala nahazo loka tamin'ny fanoratan'olon-tsotra isan'andro ao Sri Lanka ity lahatsoratra avy amin'i Anya De Saram-Larssen ity, mpianatra Sekoly Britanika ao Colombo. Nanatrika ny tsingerintaona nanombohan'ny Bisy Sakaizan'ny Elefanta Ramatoa Saram-Larssen ary niresaka tamin'ireo mpandray anjara samihafa tamin'ny tetikasa. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty nifanaovana tamin'ny Global Voices.
Nankalaza ny tsingerin-taona nanombohany voalohany tamin'ny 9 Septambra 2017 tany amin'ny faritra Wasgamuwa any Sri Lanka ny Bisy Sakaizan'Elefanta. Tetikasa fikarohana hevi-baovao novokarin'ny Fikambanana Mpiaro ny Bibidia any Sri Lanka (SLWCS) hanalefahana ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona (HEC) ity bisy ity.
Nitombo ny fifandonan'ny olombelona sy ny elefanta tany Sri Lanka rehefa nihena ny fonenan'ny elefanta ary niha-nahazo laka tsikelikely tamin'ny toerana izay handehandehanan'ny elefanta ny olombelona. Ny elefanta, rehefa tsy nanana toeran-kafa aleha intsony dia nidina teny amin'ny toera-pambolena sy ny toeram-ponenan'olombelona hitady sakafo ary lasa nasiaka izy ireo noho ny valifaty nataon'ny olona. Niteraka herisetra ity fiverimberenan'ny fanoherana, ny tahotra sy ny toerana ifandirana.
Mamono olona manodidina ny 50 eo ho eo ny elefanta isan-taona any Sri Lanka ary mizaka ny voka-dratsin'izany rehefa mitifitra, manapoizina na mandoro azy ireo amin'ny herinaratra ireo ny mponina noho ny tahotra na noho ny fiarovan-tena. Eo anelanelan'ny 100 ka hatramin'ny 150 ny elefanta maty isa-taona ary mampiseho ny antontanisa fa betsaka ny fifandonana rehefa mandeha eny amin'ny toerana izay hivezivezen'ny elefanta mahazatra ny olombelona.
Nifantoka tamin'ny fepetra midadasika ny governemanta Sri Lankey mba hanalefahana ny fifandonan'ny olombelona sy ny elefanta toy ny fametrahana fefy na ny famindrana toerana ireo elefanta na ny familiana làlana ‘faobe’ mba hanalavirana ireo elefanta amin'ny zavatra ataon'ny olombelona. Na izany aza, tsy namaha ny fifandonana eny ifotony ireo paikady ireo ary natsangana ny Bisy Sakaizan'Elefanta mba hamahana izany.
Hatramin'ny herintaona dia mandeha isan'andro ny Bisy Sakaizan'Elefanta mba hanomezana fiara fitaterana maimaimpoana sy azo antoka ho an'ireo ankizy rehefa mandeha sy miverina avy any an-tsekoly, mba hialan'izy ireo amin'ny lalana falehan'ny elefanta. Mampiasa ny bisy ihany koa ny olon-dehibe rehefa handeha hiasa sy miverina avy any ampiasana amin'ny sarany mirary. Miisa 191 eo ho eo ny olona mampiasa ilay bisy isan'andro ary miisa 72 eo ho eo ireo mpianatra.
Mamakivaky ny ‘lalan'ny elefanta’ any amin'ireo tanànakely ao afovoan'ny faritany ny lalan'ny bisy ka anisan'izany i Himbiliyakada, Iriyagasulpotha ary Weheragalagama, izay matetika hivezivezen'ny elefanta ary mbola ahitana ny fifandonan'ny olombelona sy ny elefanta mahery vaika. Any amin'ny sisiny atsimon'ny Valan-javaboary Wasgamuwa ao amin'ny faritry ny ala arovana, matetika ny olombelona no mivezivezy eo amin'ilay faritra ary mifanena amin'ny elefanta eny an-dalana mitady sakafo sy rano ivelan'ny valan-javaboary.
Namoaka horonantsary nampahafantatra ny ezaka fanangonam-bola hametrahana ny bisy tamin'ny taon-dasa i Saram-Larssen, mpianatra 12 taona ao amin'ny sekoly Britanika any Colombo. Rehefa nivarotra mofomamy tao amin'ny sekoly Britanika izy sy ny ekipany dia nahavita nahaangona 127.484 Ropia (eo ho eo amin'ny 834 USD) hividianana Bisy Sakaizan'Elefanta, izay mitentina 35,000 dolara ny vidiny, ao anatin'izany ny saran'ny lisansa sy ny alalana hitakiana ny saran-dàlana amin'ny mpandeha amin'ny lalam-bahoaka:
Nampiseho ny antontanisa SLWCS vao haingana fa nihena ho 80% ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona hatramin'ny nanombohan'ny fandehanan'ny bisy. Tao anatin'ny fito volana voalohany, nidina ho 21 ny isan'ireo fifandonana raha 83 izany teo aloha.
Raha ny filazan'i Harshini, 13 taona mipetraka ao Pussellayaya dia nanatsara tokoa ny fandehanany mankany an-tsekoly ny bisy satria tsy mila mandeha an-tongotra dimy kilometatra isan'andro intsony izy. Matetika i Harshini no tsy mandeha mianatra noho ny oram-be mivatravatra sy ny loza amin'ny fifandonana amin'ny elefanta, fa indraindray foana izy amin'izao fotoana vao tsy mankany an-tsekoly satria efa mahatsapa voaaro rehefa mandeha amin'ilay bisy.
Nilaza ireo ankizy fa tsy nanampy tamin'ny fiarovana amin'ny elefanta fotsiny ihany ny bisy fa amin'ny fanabeazana momba ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona ihany koa. Feno sary marevaka sy hafatra mifono fanabeazana momba ny fiarovana ny elefanta sy ny bibidia ity bisy mahazaka mpandeha miisa 24 ity. Nilaza i Menaka, 8 taona sy i Chathurika, 11 taona, avy any Himbiliykada fa tia mitaingina ilay Bisy Sakaizan'Elefanta izy ireo satria mahafinaritra be azy ireo ny miara-mianatra rehefa mitaingina ny bisy mandeha any sy avy any an-tsekoly.
Ireto ny sary hita tamin'ny fifaninanana zavakanto Elefanta Bisy, sary avy amin'ny Groundviews.
Nanatontosa fifaninanana zavakanto sy fifaninanan-dahatsoratra ny SLWLCS nandritra ny fankalazana ny fanombohan'ny Bisy Sakaizan'Elefanta. Manasongadina ny filaminana misy eo amin'ny elefanta sy ny mponina ary ny halehibehin'ilay fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona, anisan'izany ny tahotry ny ankizy maro amin'ny elefanta ny ankamaroan'ireo lohahevitra.
Mampiseho lehilahy iray nohitsakitsahin'ny elefanta sy ny tantsaha iray hafa noenjehin'ny elefanta ny sary hosodoko.
Nilaza Atoa Ravi Corea, filohan'ny SLWCS fa antenain'ny fikambanana ny hanova ireo fomba fijery miiba ireo amin'ny alàlan'ny fanabeazana ny ankizy amin'ny maha-zava-dehibe ny tontolo iainana sy ny filàna iarovana ny mponina rehetra.
Ahitana ny fitaovana fanabeazana marevaka momba ny elefanta ao anatin'ny Bisy Sakaizan'Elefanta. Sary avy amin'ny Groundviews.
An'ny vondrom-piarahamonina ny bisy, nanazava Atoa Corea:
Anay ny bisy ary avy ao an-tanana ny mpamily sy ny resevera. Ampiasain'ny vondrom-piarahamonina hikarakarana ilay bisy ihany koa ny vola voaangona amin'ny tapakila.
Mikasa ny hanampy bisy iray hafa any Wasgamuwa ny SLWCS ary hampiditra Bisy Sakaizan'Elefanta maro hafa ihany koa any amin'ny faritra hafa any Sri Lanka izay mbola ahitana fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona.
Mpamatsy vola tsy miankina maro isankarazany, anisan'izany ny Sharmila Cassim ao amin'ny Colombo Jewellery Stores no nanohana ny Bisy Elefanta satria:
mamela ny ankizy handeha any am-pianarana tsy tapaka ny bisy sady miaro ny elefanta hatrany mandritra izany fotoana izany.
Raha ny fahitana ny fahalavorarian'ilay Bisy Elefanta maitso marevaka dia mirehareha tamin'ity tetikasa ity ny mponina ary miezaka ny hanova ny fihetsika ratsy manoloana ny elefanta.
Etsy ankilany, afaka mivezivezy malalaka kokoa ankehitriny ny elefanta, mitady sakafo sy mifanerasera mifanaraka amin'ny natiora toy ny nataon'izy ireo nandritra ny taonjato maro.